5 Neat Semzọ Semalt SEO Ngwaọrụ na nyocha weebụ na-emeziwanye ọkwa weebụsaịtị gị
You nwere obere azụmaahịa azụmahịa, ụlọ ahịa n'ịntanetị, mmalite, onye nweere onwe ya, ma ọ bụ onye edemede nke na-agba mbọ iwepụta weebụsaịtị ha maka ogologo oge na enweghị chi ọ bụla ruo ugbu a?
Chọtala ụwa nke ọtụtụ ọghọm SEO, nke na-enweghị isi, ma na-eri oge na mbọ gị.
Ọ dị mma, ọ bụghị naanị gị!
Inweta ebe nrụọrụ weebụ gị bụ otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke ịme azụmahịa n'ịntanetị, yana ijide n'aka na ebe nrụọrụ weebụ gị pụtara na peeji mbụ nke Google kwesịrị ịbụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa.
Dabere na ọmụmụ, 95% nke okporo ụzọ dị n'ịntanetị na-agagharị na weebụsaịtị ndị na-egosi na peeji mbụ nke Google, naanị peeji ise sochirinụ na-enweta 5%.
Ugbu a, tupu i chee na egwuregwu a agwụla, ịnweta saịtị gị ọ bụghị ike. Naanị ihe ọ chọrọ bụ ntachi obi na ịrara onwe ya nye ogologo oge. Na Semalt, anyị ghọtara na nnukwu nsogbu nke oge gị na-etinye iji na-azụ ahịa gị na ijikwa ọrụ niile na-abịa na ya.
Kedu ihe kpatara anyị ji ahazi ngwaọrụ SEO na ọrụ nchịkọta Web na ọ bụghị naanị inyere gị aka inye ọkwa dị elu na Google, kamakwa nye gị ohere ịnweta data na ọnụ ọgụgụ dị mkpa banyere ndị na-eleta weebụsaịtị gị. N'ikpeazụ, ozi a nwere ike imetụta mkpebi azụmahịa gị nke ọma, nye gị ohere igosipụta omume ndị ahịa site n'ịkọwapụta mkpa ha nke ọma ma mesịa mechie azụmahịa ndị ọzọ.
Ndị nọ na Semalt arụ ọrụla ike na ịnụ ọkụ n'obi ịzụlite ngwaọrụ SEO ndị a site na ahụmịhe nke afọ. Ka anyị lebagodị anya n’otú ngwá ọrụ Semalt SEO na atụmatụ Nchịkwa Weebụsaịtị nwere ike isi nyere gị na azụmahịa gị aka ito.
5 Semzọ Semalt SEO Ngwaọrụ na Nchịkọta Weebụsaịtị na-eme ka ọkwa nrụọrụ weebụ gị dịkwuo elu
1. Njikarịcha Weebụsaịtị:
Semalt na-enye ọrụ njikarịcha mkpokọta zuru oke nke na-enyere weebụsaịtị gị aka ịnye ọkwa dị elu, na-enweghị ike, na ngwa ngwa na ngwa ọchụchọ dị ka Google . Ihe webụsaịtị juputara na nke ọma megide metrik dịka oke okporo ụzọ dị egwu, oge ole ị nọrọ na saịtị ahụ, yana ịnwe obere nkwụghachi azụ, nke pụtara isi ọnụọgụ ndị bịara na saịtị gị wee pụọ ozugbo. Ndị otu anyị nke ndị ọkachamara SEO na-agbaso mkpa ụfọdụ nke weebụsaịtị gị site na ịme atụmatụ njikarịcha SEO na web na-adọta ndị ahịa karịa ma na-enyere aka ịkwalite azụmahịa gị.
Ijide n'aka na ibu websaịtị gị ozugbo bụ akụkụ ọzọ dị mkpa nke njikarịcha weebụ. Ọ bụrụ na ọ na-ewe saịtị gị ihe karịrị sekọnd atọ iji budata, enwere ohere dị oke elu nke ndị ọrụ iwe iwe ma pụọ.
Nke a na-ebelata okporo ụzọ na-abata yana ọnụ ọgụgụ nke nlọghachi, si na ya na-emetụta etu echekwara weebụsaịtị gị. Ngwá ọrụ Semalt SEO jidere na ebe nrụọrụ weebụ gị kachasị nke ọma iji zute ebumnuche niile a tụrụ aro ma zaghachi ezu ike na-arụ ọrụ na desktọpụ na ekwentị mkpanaaka / mbadamba ebe ọ bụ na achọpụtara ihe karịrị 50% nke okporo ụzọ n'ịntanetị site na naanị smart.
Nrụpụta weebụ zuru oke pụtara na ndị ọbịa gị ga-enwe ahụmịhe dị mma nke onye ọrụ mgbe ha gara na ebe nrụọrụ weebụ gị, na-eme ka ha nwekwuo ike ịlaghachi ma lelee ya mgbe ọdịnihu.
2. Nnyocha nyocha
S Ọrụ AutoSeo nke ụlọ ọrụ gụnyere nyocha nke omimi okwu omimi maka ebumnuche gị, nzipụta peeji, njikọ ụlọ yana mkpesa nyocha zuru oke nke ejiri otu eburu n'uche mee ihe: iji nyere ebe nrụọrụ weebụ gị rịgoro n'elu Google SERPS.
Mana iji nọrọ n'ọnọdụ ọ bụla, okporo ụzọ gị nwere ike ịchọ ntụzịaka na akara ngosipụta nke ịdị adị nke saịtị gị iji rute gị. Kedu otu esi etinye ihe ịrịba ama ndị a ka ha bịakwute gị?
Ọ dị mma, site na nyocha isiokwu! Ọ bụ eziokwu na enweghị ụbụrụ. Maka na anyị ga-eme ihe n'eziokwu, ebe ọnụọgụ ihe karịrị nde ijeri atọ na ntanetị, ebe nrụọrụ weebụ gị dị ka obere azụ dị n'oké osimiri. Semalt nwere ike inyere gị aka ịgbanwe nke ahụ.
Nchọpụta isiokwu bụ ntọala dị mma SEO, na ịmara nke ọma isiokwu ị ga - etinye na ọdịnaya ị ga - etinye na ntanetị ga - akọwapụta ọ bụghị naanị ogo gị, mana njikwa okporo ụzọ gị, njikarịcha weebụ, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ma ị na-ere ngwa ahịa ọhụrụ, ọrụ ma ọ bụ onwe gị, ịmepụta ọnọdụ dị mkpa, yana ịchọta okwu ndị dabara na onodu ahụ bụ naanị ụzọ iji hụ na ebe nrụọrụ weebụ gị na-arịwanye elu na ndị mmadụ.
Ma ịchọrọ iji mkpụrụokwu dị mkpụmkpụ ma ọ bụ mkpịsị ogologo, ma ọ bụ na ịchọrọ ịchọpụta nọmba kwesịrị ekwesị iji kpọtụrụ isiokwu, Semalt AutoSEO enweghị ike ịza ajụjụ ndị a niile maka gị kamakwa ijikwa ọrụ ahụ. . Can nwere ike ikwu ọfụma gbasara ịme nyocha nyocha maka weebụsaịtị gị ma nwee ntụkwasị obi na Semalt iji rụọ ọrụ ahụ maka gị.
3. Ederede Ọdịnaya:
Anyị ekwuola banyere nyocha isiokwu na ojiji kwesịrị ekwesị dị n'elu, mana ịchọta isiokwu abụghị naanị ihe mgbaru ọsọ. Youzọ ị si eji okwu ndị a wee dee ọdịnaya nke na-agwa ndị na-ege gị ntị okwu ga-ekpebi njigide onye ọrụ.
Kedu otu ị ga - esi nweta uche onye ọrụ gị, gosipụta nsogbu ha na ngwọta ya n'enweghị nsogbu ọ bụla, ma kwekọọ n'ihe ha tụrụ anya ya.
Ederede ọdịnaya bụ nka, ọ bụghịkwa onye ọ bụla bụ onye edemede mụrụ. Site na nke ahụ kwuru, agbanyeghị, ọ pụtaghị na ịnweghị ike ịmụpụta ịmepụta ọdịnaya, emetụta, nkenke, na ozi.
Ikwesiri ighota na abia na SEO, “ndi mmadu na-ebu uzo bia,” ozugbo i gh otara nke a, o ga-adiri gi ike ide ọdịnaya nke gha eme ka ndi ọbịa gi banye ma banye n’agha.
Ide ihe odide putara na i ghaghi ime ka ndi oru gi ghara inwe otutu okwu ikwughari nke puru ime ihe iwe ma mee ka ndi oru gharazie iru ihe. Na-ede ihe iji dozie nsogbu ha, ọ bụghị ịmepụta nke ọzọ.
Ọdịnaya abụghị naanị na ọ ga-amasị ndị na-ege gị ntị mana ha nwere ike idozi nsogbu ha bịara. Ọ bụrụ na emezughi nke ọ bụla n'ime ihe ndị ahụ a chọrọ, ọnụọgụ ndị ọbịa na-alọta agaghị aba ụba.
Ndị otu Semalt na-edegara ọdịnaya na-ede akwụkwọ nwere nkà na nka ha ma nwee ike inyere saịtị gị aka ịbawanye elu ma jigide okporo ụzọ na-abata na ịlaghachi.
4. Ntanetị Weebụ
Ruo ugbu a, anyị na-ekwu ụzọ niile ngwaọrụ ngwaọrụ Semalt SEO nwere ike isi nyere websaịtị gị aka ịnọ n’usoro, n’agbanyeghi, ọ bụrụ na ịnweghị otu, echegbula. Semalt ọ bụghị naanị na ọkwá saịtị dị adị, kamakwa ọ na - ewepụta echiche na ọhụụ na ntanetị na - arụ ọrụ, site na ọkọlọtọ.
N’oge dijitalụ anyị bi na ya, weebụsaịtị na-arụ ọrụ dị ka Pọtụfoliyo, malitegharịa, na ụlọ ahịa otu ihe ị ga-eji azụ ahịa gị. Ijide n'aka na ọ na-arụ ọrụ, na-adọrọ adọrọ, na-enye ihe ọmụma, ma hazie nke ọma bụ otu ihe na-eme ka enwe mmetụta mbụ n'oge olulu ahịa.
Semalt na-enye ndị otu ruru eru nke ndị mmepe weebụ nke maara ins na out nke weebụsaịtị. Site na ịzụlite ụlọ ahịa E-commerce na ijikwa sistemụ nchịkwa ọdịnaya, ndị otu anyị ga-enye ọrụ mmepe SEO nke na-enyere azụmahịa gị aka ito.
Site na njikọta nke ngwa na usoro SEO niile, a ga-edobe weebụsaịtị gị ka ọ dị elu n’oge.
5. Nchịkọta Weebụ
N'ikpeazụ, ụzọ ọzọ dị mkpa Semalt na-enyere iji nyefee weebụsaịtị gị aka bụ site na ịnye nchịkọta site na nchịkọta isiokwu Semalt na nyocha weebụsaịtị iji nọrọ n'elu nke ọhụụ.
Onye nyocha ahụ na-egosi nhọta ebe nrụọrụ weebụ gị dị na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ Google ma na-enye isi okwu nke nwere ike inyere aka bulie ebumnuche SEO ezubere. Also ga-enyochakwa etu asọmpi gị na-arụ na ịchọpụta na-arụrụ ha ọrụ.
Nchịkọta dị oke mkpa iji mee mkpebi ndị ọdịniihu metụtara azụmaahịa na mkpọsa SEO a ezubere iche nke agaghị adọta ndị ahịa ọhụụ kamakwa hazie ogo. Semalt na-enye gị nghọta niile dị gị mkpa iji mee mkpebi ndị ahụ yana ndụmọdụ ndị ọkachamara banyere ịme usoro ndị ọzọ.
Ọrụ nchịkọta weebụ site na Semalt bụ onye na-agbanwe egwuregwu ma a bịa na mkpọsa SEO gị.
Cannye nwere ike irite uru na Semalt SEO Ngwaọrụ na Nchịkwa Weebụ?
Ugbu a, ọ bụrụ na ị na-eche onye ga-erite uru na Semalt SEO ngwaọrụ na nchịkọta weebụ, azịza dị mkpụmkpụ bụ onye ọ bụla na onye ọ bụla nwere ọnụnọ n'ịntanetị.
Azịza dị ogologo, n'aka nke ọzọ, bụ onye ọ bụla nwere azụmahịa, ọchụnta ego, ụlọ ọrụ niche, ma ọ bụ ndị na-enye ọrụ dị mkpa chọrọ ịzụ ahịa ha n'ịntanetị ma chọọ ihu akwụkwọ maka ndị na-ege ha ntị chọrọ.
Ma ị bụ onye edemede na ahụike na ụzọ ndụ, ma ọ bụ onye edemede akwụkwọ nwere mmasị na akụkọ, ma ọ bụ onye na-anụ ọkụ na-enwe ọ reviewụ na nyochaghachi ngwa ahịa kachasị ọhụrụ na ahịa, ngwá ọrụ Semalt SEO nwere ike inyere websaịtị gị aka ị nweta ndị na-ege ntị n'ofe ụwa ọzọ.
Ọbụghị naanị na ị nwetara nghọtaye ahaziri iche maka ndị niche gị, kamakwa akụ niile ọzọ n'otu ebe, na ị gara aga ịchọ otu n’otu.
Yabụ, ma ị na-achọ ịgbasa azụmahịa gị n'ịntanetị ma ọ bụ na ịchọrọ ire ahịa gị dị egwu site na weebụsaịtị gị, Semalt ga-akwado gị wee jide n'aka na weebụsaịtị gị kachasị nke ọma maka SEO, azụmahịa gị ga-aga nke ọma ruo ọtụtụ afọ na-agba.
Semalt bu ihe ntinye ahia igwe dijitalụ zuru oke nke SEO ga - eme ahia gi ozo. Ma ị na-achọ njikarịcha mkpokọta weebụ, mmepe weebụ, nyocha, ma ọ bụ na-achọ enyemaka n'ichepụta ọdịnaya ejiri ebumnuche ziri ezi zoo, kpọtụrụ anyị.
Ngwá ọrụ na ọrụ Semalt na-enye ga-eme ka ọ doo anya na ebe nrụọrụ weebụ gị ka etinyere elu Google. N'ụzọ nke a, ị ga - abụ otu nzọ ụkwụ tupu asọmpi gị ma nweta ọtụtụ okporo ụzọ ahịhịa iji bulie ego ha na enweta.
Semalt nwere ngwugwu dị iche iche maka ụdị onye ọ bụla nwere azụmahịa; ma ịchọrọ AutoSeo, FullSEO, Mgbasa Weebụ ma ọ bụ Nchịkọta Weebụ, kpọtụrụ ndị otu anyị taa ịchọpụta ihe ga-akacha mma maka gị na azụmahịa gị, ka anyị wee nwee ike ịmalite njem nke iwepụ weebụsaịtị gị ọnụ.
Nchịkọta dị oke mkpa iji mee mkpebi ndị ọdịniihu metụtara azụmaahịa na atụmatụ mkpọsa SEO nke na-agaghị eleta ndị ahịa ọhụrụ kamakwa meziwanye ogo.